Guddoomiyaha baarlamaanka oo qoraal deg deg ah u diray ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Guddoomiyaha baarlamaanka oo qoraal deg deg ah u diray ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre (AKHRISO)
Guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Prof. Maxamed Cismaan Jawaari ayaa qoraal uu u diray ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre kula taliyay inuu dib u eegis deg deg ah ku sameeyo golihiisa wasiirada uu dhawaan soo magacaabay, kahor inta uusan ka dhammaan xilliga la horgeynayo baarlamaanka Soomaaliya.
Prof. Jawaari oo u muuqda mid uu kaga soo horjeedo golaha wasiirada cusub ee uu dhawaan soo magacaabay ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa waxaa qoraalkiisa ku lifaaqsan qoraal kale oo ay soo gudbiyeen illaa 105 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya.
Qoraalkaas ayaa isna waxay xildhibaanadaasi ku dhaliilayaan ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre inuusan raacin habka beelaha awood qeybsiga dalka ee 4.5.
Ugu dambeyntii, guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa ka rajeeyay ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre inuu tixgelin siin doonto soo jeedintaan toosinta ah oo qaddarinta mudan, kahor inta uusan wasiiradiisa cusub horkeenin baarlmaanka Soomaaliya.
Hoos ka aqriso warqadaha guddoonka iyo kuwa xildhibaanada baarlamaanka.